आइपीएलः विराटलाई पछि पार्दै शिखरले बनाए यस्तो कीर्तिमान - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः विराटलाई पछि पार्दै शिखरले बनाए यस्तो कीर्तिमान
काठमाडौं, वैशाख १६ । भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत दिल्ली क्यापिटल्समा आवद्ध शिखर धवनले यो संस्करणमा पनि शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनी जारी आइपीएलमा सर्बाधिक रन बनाउने खेलाडीको तेस्रो नम्बरमा छन् । शिखरले १२ खेलमा ४१५ रन बनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अष्ट्रेलियालाई पहिलो सफलता, शिखर शून्य रनमै आउट!
उनले आइपीएलमा ३७औं अर्धशतक पूरा पनि गरेका छन् । यो अर्धशतकसँगै शिखरले विराट कोहलीलाई पछि पार्दै आइपीएलमा सबैभन्दा बढी अर्धशतक बनाउने पहिलो भारत खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् । उनीभन्दा अघि अब डेबिड वार्नर मात्र छन् । वार्नरले आइपीएलमा हालसम्म ४३ अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः भारतलाई दोस्रो झड्का, पूरा गर्ला २२० रनको लक्ष्य ?
गौतम गम्भीर, विराट कोहली, सुरेश रैनाले आइपीएलमा समान ३६ अर्धशतक बनाएका छन् । यस्तै, मुम्बई इन्डियन्सका कप्तान रोहित शर्माले ३५ अर्धशतक आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । शिखरले हालसम्म आइपीएलमा खेलेका १५५ म्याचमा ३३.९० को औसतमा १२४.७६ को स्ट्राइक रेटमा ४५०९ रन प्रहार गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपको प्रशंसा गर्दै शिखरले भने, ‘उनी नेपाली युवाको प्रेरणा हुन्’
ट्याग्स: Sikhar Dhawan